“Dhul-boobka Maamulka Degmada Daarasalaam ku wado Dhul daaqsimeedka Xoolaha waa in degdeg xukuumaddu wax uga qabato” | Somaliland Post
Home News “Dhul-boobka Maamulka Degmada Daarasalaam ku wado Dhul daaqsimeedka Xoolaha waa in...
“Dhul-boobka Maamulka Degmada Daarasalaam ku wado Dhul daaqsimeedka Xoolaha waa in degdeg xukuumaddu wax uga qabato”
Hargeysa, 21 July, 2012 (Ogaal)- Xubno ka mid ah Wax-garadka iyo Aqoonyahanka Woqooyiga Hargeysa, ayaa xukuumadda Somaliland ugu baaqay boob ay sheegeen in maamulka degmada Daarasalaam ku hayo dhul-daaqsimeedka Xoolaha ee Degmadaas.
Bayaan oo ay ku saxeexan yihiin toban ka mid ah Wax-garadka deegaanka Woqooyiga Hargeysa oo ay kaga hadlayaan taariikhda iyo muhiimadda dhul-daaqsimeedka degmadaas, ayaa u dhignaa sidan:
“Ka hor burburkii dalka ku habsaday iyo xataa illaa wakhtigii mustacmarada Ingiriiska, wuxu dhulka miyigu u qaybsanaa dhul beereed waxsoosaar leh oo wax laga beerto iyo dhul daaqsimeed xoolaha lagu dhaqdo oo ka caagan in ujeeddo beereed loo ijaarto. Waxa jiray xad loo yaqaannay mitirka oo aan la dhaafin jirin beeraha kaasoo tusaale woqooyiga Hargeisa ku ekaa Biyo-shiinaha, illaa Faarax Baladi oo Bari iyo Galbeed dhararan. Ka hor 1988kii, mitirkan ayaa xad u ahaa sharcigii “Forestry-gu” ku dhaqmi jireen. Way jireen deegaanno iyo degmooyin badan oo ka fog xadkaas galbeedka Hargeisa balse iyagu immika noqday dhul waxsoosaar kuwaasoo carro ahaan iyo bee’ad ahaanba ku habboon beer roobaadka iyo beer-waraabkaba marka tacab la galiyo sida degmada Allaybaday iyo Koonfurta Gabiley intiisa badan. Haseyeeshee, intii ka dambaysay burburkii dagaalladii Afweyne, waxa ka bilawday deegaanno badan iyo degmooyinka dibadda ka ah magaalooyinka gaar ahaan gobolka Maroodijeex in si qorshe la’aan ah loo ooto dhul daaqsimeedkii xooluhu daaqi jireen taasoo saamayn xun ku yeelatay waxsoosaarkii xoolaha iyo nolosha bulshada reer miyiga ah ee gaar ahaan xoola dhaqatada ah.
Dhinaca Woqooyi ee Hargeysa, marka laga reebo inta Mitirku maro ee Biyo-shiinaha iyo Faarax Baladi ka soo sarreeya iyo dhulka dooxyada ah ee beer waraabka leh sida Horohaadley, Kalqoray, Malluugta, Annayo iyo meelaha la mid ka ah oo xadidan, dhulka kale illaa Laga gaadho xeeb iyo badda, wxxuu dhul xoolo daaqsimeed ah oo aan ku habboonayn ama aan loo oggolayn in ooto ujeeddo dhul beereed iyo in sifooyin kale loo seestaba.
Arrintan waxa immika ku wada baraarugay bulshada xoola dhaqatada ah iyo waxgaradka kale ee deegaanka woqooyi, waxana ka dhalan kara khilaaf iyo iska hor imaad haddii aan waxba laga qaban si dhakhso ah maadaama ay dadka xoola dhaqatada ah ee deegaanku arkayaan tuugada caddaanka ah iyo dhul boobka ka socda dhulkoodii. Arrintani maaha mid ka jirta degmooyinka kale ee dibadda ka ah Hargeysa oo kuma kacaan maamullada degmooyinku khiyaamo illaa heerkaas ah iyo boobka dhul daaqsimeedka sidan u weyn.
Maxamuud Axmed Cali _________
Cali Maxamed Cismaan _________
Cabdi Ismaaciil Cilmi _________
Axmed Mawliid Aw Cabdi_________
Axmed Adan Xasan_________
Cawil Ismaaciil Kaariye _________
Cabdirashiid C/laahi _________
Iid Cabdillaahi Cali _________
Mawliid Faarax M._________
Naasir Yaasiin Axmed ________